Maxaa ka jiraa in xashiishka lagu daweyn karo feyraska Korona? | Hangool News
Maxaa ka jiraa in xashiishka lagu daweyn karo feyraska Korona?
May 27, 2020 - Written by Hangool News 1
Baraha bulshada waxaa ku bahaay qoraallo been abuur ah isla markaana marin habaabin ah oo ku saabsan safmarka feyraska Korona.
Waxaan xaqiiqo baaris ku sameyneynaa qoraalladaas si weyn loo baahiyay.
Image captionWaxaa la arkay xubno ka tirsan baarlamaanka Ruushka oo kaarar calaamado ah ugu dhegan yihiin dharkooda, waxaana la sheegay in kaarkaas uu difaacayo fayraska corona.
Qalab la rumeysan yahay in cudurka uu kaa difacayo
Dadka waxay agabkan ugu yeerayeen ‘qalabkii difaaca’ waxay rumeysan yihiin in mid ka hortaggayo cudurka, waxaana lagu kala iibsanayay meelo badan oo dunida ka tirsan.
Qaar ka mid ah qalabka, waxaa ka muuqday calaamad cad oo istilaab ah oo si been ah loogu qoray ‘Qalabkii feyrsaka joojinayay’ ee gudaha Ruushka.
Qaar ka mid ah xildhibaannada Ruushka ayaa xirtay xilli dhawaan uu shir uga furmay gobolka Duma ee dalkaas.
Si kastaba, Waaxda la socodka tayada cuntooyinka iyo dawooyiinka ayaa sheegtay in qalabkan la sheegay ay ku jirto maaddada chlorine dioxide oo ah mid halis ah, waxay sidoo kale sheegtay in arrinta ah in lagu daweyn karo feyraska Korona ay tahay mid been ah oo khiyaano ah.
BBC-da qeybta la hadashada Ruushka ayaa xildhibaan Andrei Svintsov oo kamid ahaa dadkii xirtay qalabka weydisay waxtarkiisa, wuxuu ku jawaabay in uusan garaneyn inay waxtar leedahay ama in kale balse uusan weli dareemin wax xannuun ah.
“Waxaan calaajiyay Sanjabiil, waxaan qaadanaya fiitaamiin C, dhammaan waxyaabaha qashinka ah ay Internet-ka ku sheegayaan ayaa isticmaalaa dhammaan, haddii wax kale la waayo”.
Afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin, Dmitry Peskov wuxuu qabay qalab la mid ah midkan balse toddobaadkii la soo dhaafay waxaa la xaqiijiyay in Dmitry Peskov uu ku dhacay feyraska Korona, haddana wuxuu ku jiraa isbitaal.
Dr Wayne Carter oo ka tirsan jaamacadda Nottingham kuna takhasusay maadada biochemist ayaa sheegay in qalabka uusan ka hortaggi karin cudurka.
Image captionWaxay noqoneysaa arrin lala soo degdegay oo aan la xaqiijin in maandooriyaha xashiishadda lagu daweyn karo cudurkan safmarka ah.
Kumannaan kun oo qof ayaa faafiyay qoraallo muujinaya in xashiishka lagu daweyn karo feyraska Korona, halka ciwaanka qorollaada ay ahaayeen kuwo marin habaabin ah.
Waxaa meelo ka tirsan dunida ka socdaa tijaabo lagu sameynayo in Xashiishka lagu daweyn karo cudurka, waxaana ka mid ah Canada, Israa’iil iyo UK, waxay wadaan baaritaanno ah in maandooriyahan loo adeegsan karo daweynta cudurka Covid-19.
Xashiishka dawada ah waxaa la ogaaday in uu yareyn karo xaasaasiyadda ka dhalan karto jirka marka uu dhaawac soo gaaro- jawaabtan ka dhalatay difaaca jirka waxaa sidoo kale lagu arkay bukaanada uu ku dhacay fayraska Covid-19.
Tijaabadan waxay mareysaa marxaladaha ugu horreeyay. Dhawaan waxaa lagu wadaa in la soo saaro natiijada ka soo baxda in maandooriyaha xashiishka lagu daweyn karo bukaanada uu ku dhacay fayraska Korona ama in kale.
Mid kamid ah maqaallada ayaa lagu soo bandhigay barta Facebook kaas oo fidinayay warar been abuur ah. Ninkii qoray maqaalka ayaa barta PolitiFact u sheegay in ciwaanka maqaalka ‘laga badbadiyay’ kaas oo ahaa in xashiishka laga yaabo in uu ka hortaggi karo feyraska.
Isku dayga ah in xashiishka uu dawo u yahay cuduro kala duwan waxay soo jiitay indhaha caalamka sannadihii u dambeeyay iyadoo ay soo baxayaan caddeymo kala duwan.
Wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan halka uu ka soo farcamay fayraska Covid-19
Waxaa baraha bulshada ku baahay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan halka uu ka soo farcamay feyraska Korona.
Waxaan eegeynaa muuqaal dhawaan ka soo baxay warbaahinta dowladda Shiinaha oo muujinayo in cudurka markii hore laga soo tebiyay Shiinaha balse arrintaas aysan ka dhigneyn in fayraska uu ka soo faracmay gudaha Shiinaha.
Muuqaalka waxaa ku jira haddal ka soo baxay seynisyahan u dhashay Talyaaniga xilli uu wareysi siinayay raadiye Mareykanka, wuxuuna u sheegay in waqooyga Talyaaniga ay ka jireen kiisas aan la shaacin oo ku saabsan cudurka oof wareenka ah, qofkii tebinayay muuqaalka wuxuu sheegay in ‘in arrintaas ay ka dhigan tahay in fayraska uu ku faafayay qeybo ka mid ah Talyaaniga ka hor inta uusan ka dilaacin Shiinaha.
“Tan iyo bishii May, Shiinaha wuxuu waday hadalka ah ‘in fayraska uusan ka soo billaabanin dalkiisa'”, sida ay sheegtay weriyaha BBC ee ka faallooda arrimaha Shiinaha, Kerry Allen.
Illaa iyo hadda lama hayo baaritaanno cilmiyeysan oo lagu xaqiijin karo arrintan.
Dr Emma Hodcroft, oo ku takhasustay dabagalka cudurrada safmarka noqda, kana tirsan Jaamacadda Basel, ayaa sheegtay in tijaabooyin baaritaan oo lagu sameeyay fayraska ee gudaha Mareykanka iyo Yurub ay muujiyeen inuu asal ahaan ka soo billowday Shiinaha, laakiin noocyada la baaray ay yihiin kuwo ka saameyn badan sii asalka ahaa, maadaama ay goor dambe soo baxeen.
“Si kooban, gabi ahaanba ma jirto caadeyn loo hayo in asalka fayraska uu yahay Shiinaha,” ayey tiri Dr Hodcroft
Image captionWaxaa Yemen laga soo sheegay sare u kaca dhimashada cudurka korona.
“Dilka dad badan”
Horraantii toddobaadkan, wasiirka warfaafinta ee Yemen Moammar al-Eryani wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in warar kala duwan ay sheegayaan in “dad badan oo looga shakiyay inay qabaan feyraska Korona lagu dilay deegaannada ay mucaaradku ku xooggan yihiin”.
Wuxuu jeediyay eedeynta ah in dadkaas la dilayay iyadoo aan laga baarin cudurka.
Maleeshiyadka Xutiyiinta ayaa beeniyay eedeymaha ah in ay dileen dad badan oo ay uga shakiyeen in uu ku dhacay fayraska Korona.
Afhayeen u hadlay dowladda Yemen wuxuu ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo eedeymaha ah in dad badan la laayay.
Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa muddo shan sanno ah dagaal kula jiray dowladda uu caalamka ictiraafsan yahay ee Yemen, labada dhinaca waxay isku jeediyaan arrimo kala duwan.
Xutiiyiinta waxay sheegeen in wararka la isla dhexmarayo ay ka dambeeyaan isbaheysiga dagaalka ka wado Yemen oo ay horkacayaan Mareykanka iyo Sucuudiga kuwaas oo weerar ku hayo malleeshiyaadka Xuutiyiinta.
Balse ma jiraan caddeymo xaqiijin karo eedeymaha ah in dadka looga shakiyay cudurka Covid-19 lagu laayay Yemen.
In ka badan 100,000 qof ayaa Yemen ugu dhimatay dagaallo sokeeye, cudurro iyo nafaqo darro ka dilaacay halkaas.